के भन्छन् प्रमुखका उम्मेदवार ?- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १६, २०७९ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — मोरङमा एक महानगरसहित १७ पालिका छन्, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या ८/८ छ । यी सबैको केन्द्र विराटनगर महानगरको प्रमुखमा विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका सागर थापालाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको छ भने कांग्रेसले नागेश कोइरालालाई ।
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुँदै पार्टीको नगर कमिटी अध्यक्ष भएका थापा र तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पार्टी उपसभापति भएका कोइरालाबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यी दुईबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।प्रस्तुत छ विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार कोइराला र थापासँग गरिएको कुराकानी:
महानगरलाई बनाउने एजेन्डा के छन् ?
कोइराला : सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले पछि पर्दै गएको विराटनगरको उत्थानका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । उद्योगलाई आकर्षित गर्न कर घटाउने र करको दायरा बढाउने पहिलो लक्ष्य छ । १० रुपैयाँको करलाई तीन सय बनाइएको छ, त्यसलाई कम्तीमा ३० रुपैयाँमा झार्ने र दायरा बढाउने योजना मैले अघि सारेको छु ।
थापा : समृद्ध विराटनगर बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता रहनेछ । केन्द्रसँगको समन्वयमा चक्रपथ, सुनसरी–मोरङ सिँचाइ, नहर बाइपास, ट्राफिक समस्या हल, ब्युटिफिकेसन्स र स्पोर्ट्स जोन बनाउने योजना छ ।
निर्वाचित भएमा प्राथमिकताका योजनामा के पर्छन् ?
कोइराला : शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ मुख्य प्राथमिकता छन् । दुई–तीन घण्टा पानी पर्दा विराटनगर जलमग्न हुन्छ । पूर्वको सिंघिया र पश्चिमको केसलिया खोलाले विराटनगरमा सधैं ताण्डव मच्चाउँछ । यी खोला नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गर्ने र करिडोरमाथि सडक बनाउने उपाय हुन्छ । त्यसका लागि दातृ निकाय, संघीय सरकार र स्थानीय निकायको पहलमा योजना अगाडि बढाउने लक्ष्य छ । महानगरको लगानीमा अस्पताल चलाउने, ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, असहायलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गराउने मेरो लक्ष्य छ ।
थापा : सिंघिया खोला र केसलिया खोला नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्रोतको १० वर्षको बजेटले पनि पुग्दैन । म मेयर भएँ भने काम सुरु गर्छु तर पाँचै वर्षमा सकिन्न । यसमा केन्द्रीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको लगानी चाहिन्छ । मेघा हल, वडा १९ लाई खेलकुद हब बनाउने, साख गुमाएको औद्योगिक सहरको विकासका लागि प्रदर्शनीस्थल स्थापनादेखि उद्योग व्यवसायमा आकर्षण बढाउने काम गर्नेछु ।
औद्योगिक नगरको पहिचान गुम्न नदिने योजना के छ ?
कोइराला : विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र एक नम्बरमा थियो, अहिले छैटौं स्थानमा छ । पुराना उद्योगीलाई सहुलियत दिने, नयाँलाई आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गरेर पुरानै साखमा विराटनगरलाई पुर्‍याउने योजना छ । विगतमा २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको रिक्तता, स्थानीय बासिन्दा सचेत नभएका कारण विराटनगर पछि परेको हो । यो ठाउँबाट विराटनगरलाई अघि बढाउन म लाग्नेछु ।
थापा : उद्योगका लागि स्थानीय तहमा कच्चा पदार्थको अभाव छ । जुट उद्योगकै लागि बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ । उद्योग व्यवसायी पलायन हुनुका पछि राज्यको नीतिगत समस्या छ । केन्द्रसँग समन्वय गरेर त्यसलाई हटाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र वातावरण दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने मेरो योजना हो ।
प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०७:०१
डुबान समस्याको समाधान, सहरमा हरियाली, सार्वजनिक शौचालय, विपन्नलाई राहत, ढलको स्थायी निकास, रिङरोड, ट्राफिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा जनताको चासो
वैशाख १६, २०७९ कुलचन्द्र न्यौपाने, विनोद भण्डारी
विराटनगर — इतिहासमा विराटनगरलाई सम्झने दुई चिज छन्– आधुनिक औद्योगिकीकरण र राजनीतिक जागरणको केन्द्र । कृष्णप्रसाद कोइरालाले रोपेको राजनीतिक जागरण आन्दोलनलाई उनका छोराहरूले जीवनकालभर मर्न दिएनन् । बीपी, गिरिजा र मातृकाप्रसाद यही भूमिबाट प्रधानमन्त्री भए । विराटनगरले मनमोहन अधिकारी र नगेन्द्रप्रसाद रिजालसमेत पाँच प्रधानमन्त्री जन्माइसकेको छ ।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा यतिबेला इतिहास सम्झाउने मुद्दा उठेका छैनन् बरु जसरी पनि चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा छन् दलहरू । एकातिर कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन छ भने अर्कोतर्फ एमाले नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल र परिवार दलसहितको तालमेल । दुवै गठबन्धनतिर असन्तुष्टहरूको समूह पनि उत्तिकै छ ।
मोरङमा एक महानगरसहित १७ पालिका छन्, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या ८/८ छ । यी सबैको केन्द्र विराटनगर महानगरको प्रमुखमा विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका सागर थापालाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको छ भने कांग्रेसले नागेश कोइरालालाई । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुँदै पार्टीको नगर कमिटी अध्यक्ष भएका थापा र तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पार्टी उपसभापति भएका कोइरालाबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा करिब ६ हजार मतले कांग्रेसका भीम पराजुलीले प्रमुख जितेकाले कोइराला पुरानो अंक गणितको आधारमा ढुक्क देखिन्छन् । उनका लागि थप बलियो आधार सत्ता गठबन्धनको तालमेल पनि छ । उनी विराटनगरको माटोसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको बताउँछन् ।
मध्यम परिवारबाट आएका थापा र सम्पन्न परिवारमा हुर्किएका कोइरालाबीचको प्रतिस्पर्धालाई कतिपयले ‘धन र डन’ सँग पनि तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘एउटा कुरा निश्चित हो, नागेशजीलाई हामीले चन्दा दिनुपरेको छैन । यो हाम्रा लागि सुखद नै हो,’ स्थानीय एक व्यवसायीले भने । कोइरालाले पनि आफूले चन्दा माग्ने नगरेको बताए । थापा भने आफू स्थानीयवासीकै सहयोगमा अघि बढेको बताउँछन् । ‘मैले खर्च गर्नुपरेको छैन, स्थानीयकै सहयोगमा चलिरहेको छ,’ चुनावी प्रचारमा व्यस्त उनले कान्तिपुरसँग भने ।
घोषणापत्रमा कांग्रेस र एमालेका कार्यक्रम र योजना उस्तै छन् । तर, ती घोषणापत्रले जनतालाई छुन सकेका छैनन् । ‘विराटनगरलाई यति वर्षमा यस्तो बनाउँछु भन्ने कार्यक्रम र योजनासहितको एजेन्डाप्रति जनतालाई विश्वास जगाउन सकेका छैनन्,’ नागरिक अगुवा पीताम्बर दाहालले भने, ‘कबुल गरेका कुरा पूरा नगर्दा जनताले घोषणापत्रलाई पत्याएका छैनन् ।’ दलका घोषणापत्रमा फ्लाइओभरदेखि विराटनगरवासीले उठाएका सबै मुद्दा समेटिएका छन् । व्यवस्थित र वैज्ञानिक अध्ययनबिनै आउने भएकाले राजनीतिक नेताका नाराप्रति जनताको विश्वास नजागेको उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको भनाइ छ । ०७४ को निर्वाचनमा पनि यस्तै नारा घोषणापत्रमा समेटिएका थिए तर यसबीच एउटै सार्वजनिक शौचालय बन्न सकेन । हाटखोलामा भएको पुरानो शौचालय पनि व्यवस्थित छैन । राजमार्गको मुख्य चोकबाट पश्चिममा रहेको ६० घर मुसहर बस्ती अझै खुला दिसामुक्त हुन सकेको छैन ।
चार पुस्ताअघिदेखि छाप्रो बनाएर बसेका मुसहरहरूको बस्तीमा बिहीबार प्रमुख पदका उम्मेदवार भोट माग्दै पुग्दा उनीहरू आक्रोशित देखिएका थिए । ‘नेताले भोट मात्रै माग्छन्, केही दिने होइनन् । अहिलेसम्म हाम्रो लालपुर्जा छैन । पहिला एउटा साइकल चढेर भोट माग्न आयो, जिताएपछि फर्केर आएन,’ मुसहर बस्तीकी सुमित्रा ऋषिदेवले भनिन्, ‘मजदुरी गरेको दिनमात्रै खान पाइन्छ । हावाहुरीले छाप्रो उडाउँदा कहाँ गएर बस्ने ? हाम्रो दुःख कसैले हेर्दैन ।’ मुसहर बस्ती नजिकका जगतप्रसाद गिरीले चुनाव जितेर गएपछि सबै ‘राजा’ हुने गरेको सुनाए । ‘नेताहरूले देश बिगारे, जनतालाई पनि गरिब बनाए,’ उनले भने, ‘फेरि माग्न आएका छन्, जितेर जान पाए भने राजा होइन्छ भन्ने लागेको छ ।’
विराटनगरको मुख्य चोकबाट पश्चिममा रहेको मुसहर बस्तीका बासिन्दा । तस्बिरः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष रिजालका अनुसार विराटनगर महानगरका १९ वडाभित्र करिब १२ हजार निमुखा घरधुरी छन् । तिनले काम नपाएको दिनमा खाना नपाउने अवस्था छ । उनीहरूका लागि आवास बनाउने, बिजुली र खानेपानी निःशुल्क गर्ने योजना महानगरले तत्काल अघि बढाउन आवश्यक भएको उनी सुनाउँछन् । डुबानबाट विराटनगरलाई बचाउनेदेखि सहरमा हरियाली, सार्वजनिक शौचालय, बजारवासीको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी, विपन्न वर्गलाई राहत र ढलको स्थायी निकासको प्रबन्ध, रिङरोड, ट्राफिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा जनताको चासो देखिन्छ । औद्योगिक नगरीको पहिचान बनाएको विराटनगरमा एउटै प्रदर्शनी स्थलसमेत छैन । ‘नागरिकका यी मुद्दाप्रति कसैले हुन्न भन्दैनन्, हुन्छ गर्दिन्छु भन्छन् तर पदमा पुगेपछि रिबन काट्न र भाषण गर्नमै समय खेर फाल्छन्,’ रिजालले भने, ‘व्यवस्थित र वैज्ञानिक योजनाका साथ विराटनगरलाई अघि बढाउने संकल्प लिन सकियो भने पैसाको अभाव हुन्न, दातृसंस्थाहरू सहयोग गर्न तयार छन् । त्यसका निम्ति मेयर बन्नेले सक्रिय राजनीतिबाट अलग भई विकासको सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।’
विराटनगरवासीका लागि सबैभन्दा ठूलो पीडा डुबानको छ । पानी पर्न थालेपछि पूर्वको सिंघिया खोलाले ६ वटा वडा र पश्चिमको केसलिया खोलाले चार वडामा क्षति पुर्‍याउँछ । डुबान रोक्ने योजना अहिलेसम्म न संघको सरकारले अघि बढाएको छ, न त स्थानीय तहले । डुबान रोक्न दुवै खोलातर्फ करिब ३/३ किलोमिटरको तटबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘त्यसका लागि योजना र बजेट नै छैन,’ रिजालले थपे, ‘एकैचोटि बनाउन नसकिएला, तर सुरु गरे बजेटको अभाव हुन्न ।’
बीपी कोइरालाका कान्छा छोरा शशांक अहिले कांग्रेसको नेतृत्व तहमा छन् । तर उनले आफ्नो जन्मस्थानलाई नभएर नवलपरासीलाई राजनीतिक मैदान बनाएका छन् । यस भूमिमा कोइराला परिवारको पारिवारिक विरासत केशव (बीपीका भाइ) का छोरा शेखर र गिरिजाप्रसादकी छोरी सुजाताले धानेका छन् । राजनीतिले धेरै रङ बदले पनि कोइराला परिवारको विरासत कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा निर्णायक छ । तर, राजनीति जागरणसँगै आफ्नो पहिचान बनाएको आधुनिक औद्योगिकीकरणको ६ दशकअघिको त्यो इतिहास भने विराटनगरले गुमाएको छ ।
‘हामीले इतिहास पढाउँदा आधुनिक औद्योगिकीकरणको सुरुवात भएको पहिलो सहर भनेर विराटनगरलाई चिनाउँछौं, तर त्यो गर्विलो पहिचान नामेट भइसकेको छ,’ महेन्द्र मोरङ कलेजका प्राध्यापक अर्जुनकुमार बराल सम्झन्छन, ‘६ दशकअघिको त्यो विराटनगर रोजगारी र औद्योगिक अध्ययनको केन्द्र थियो ।’
यसबीच परिवर्तन नभएको भने होइन । एसियाली विकास बैंकको झन्डै ७ अर्ब रुपैयांँमा ८० किमि सडक फराकिलो बनाउने र पिच गर्ने काम एक वर्षअघि सम्पन्न भएको छ । सहरका भित्री र बाहिरी भागमा ठूला र साना १ सय १७ किमि ढल निर्माण भएका छन् । ठुल्ठूला व्यावसायिक सपिङ कम्प्लेक्स छन् । तर सहरले आफ्नो पहिचान भने गुमाउँदै गएको छ । उद्योग चलेका छैनन्, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
महानगरमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा राजनीतिक दलका नाराले आमजनता र निजी क्षेत्रलाई जोड्न सकेका छैनन् । ‘विराटनगरलाई औद्योगिक सहरका रूपमा विकास गरेर पुरानो साख फर्काउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । कच्चा पदार्थ ल्याउन ठूलो नाका यहीं छ । लगानी गर्ने धनाढ्य प्रशस्त छन् । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो इच्छाशक्ति र योजना आवश्यक छ,’ प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै सरकारले विराटनगरलाई औद्योगिक सहरका रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय नीति बनाउन आवश्यक छ ।’
उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष रिजाल जनप्रतिनिधिमा योजना बनाउने, पुँजी संकलन र परिचालन गर्ने ज्ञानको अभाव देखिएको बताउँछन् । ‘पदमा पुगेपछि विराटनगरलाई बनाएर देखाउँछु भन्ने इच्छाशक्ति पनि भएन । बरु, कसरी पार्टी संगठनको वर्चस्व स्थापित गर्ने भन्नेमा ध्यान गयो,’ उनले भने, ‘स्रोत संकलन गर्ने प्रशस्त सम्भावना एकातिर खुम्चिरहेको छ, अर्कोतर्फ करको भारी बोकाएर उद्योग व्यवसायलाई हतोत्साही बनाउने काम भएको छ । करको दर घटाउने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्न उद्योगमैत्री नीति र कानुन आउन सके विराटनगरले आफ्नो गुमेको साख फर्काउन सक्छ ।’
कोइराला: सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले पछि पर्दै गएको विराटनगरको उत्थानका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । उद्योगलाई आकर्षित गर्न कर घटाउने र करको दायरा बढाउने पहिलो लक्ष्य छ । १० रुपैयाँको करलाई तीन सय बनाइएको छ, त्यसलाई कम्तीमा ३० रुपैयाँमा झार्ने र दायरा बढाउने योजना मैले अघि सारेको छु ।
थापा: समृद्ध विराटनगर बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता रहनेछ । केन्द्रसँगको समन्वयमा चक्रपथ, सुनसरी–मोरङ सिँचाइ, नहर बाइपास, ट्राफिक समस्या हल, ब्युटिफिकेसन्स र स्पोर्ट्स जोन बनाउने योजना छ ।
कोइराला: शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ मुख्य प्राथमिकता छन् । दुई–तीन घण्टा पानी पर्दा विराटनगर जलमग्न हुन्छ । पूर्वको सिंघिया र पश्चिमको केसलिया खोलाले विराटनगरमा सधैं ताण्डव मच्चाउँछ । यी खोला नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गर्ने र करिडोरमाथि सडक बनाउने उपाय हुन्छ । त्यसका लागि दातृ निकाय, संघीय सरकार र स्थानीय निकायको पहलमा योजना अगाडि बढाउने लक्ष्य छ । महानगरको लगानीमा अस्पताल चलाउने, ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, असहायलाई निःशुल्क उपचार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गराउने मेरो लक्ष्य छ ।
थापा: सिंघिया खोला र केसलिया खोला नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्रोतको १० वर्षको बजेटले पनि पुग्दैन । म मेयर भएँ भने काम सुरु गर्छु तर पाँचै वर्षमा सकिन्न । यसमा केन्द्रीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको लगानी चाहिन्छ । मेघा हल, वडा १९ लाई खेलकुद हब बनाउने, साख गुमाएको औद्योगिक सहरको विकासका लागि प्रदर्शनीस्थल स्थापनादेखि उद्योग व्यवसायमा आकर्षण बढाउने काम गर्नेछु ।
कोइराला: विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र एक नम्बरमा थियो, अहिले छैटौं स्थानमा छ । पुराना उद्योगीलाई सहुलियत दिने, नयाँलाई आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गरेर पुरानै साखमा विराटनगरलाई पुर्‍याउने योजना छ । विगतमा २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको रिक्तता, स्थानीय बासिन्दा सचेत नभएका कारण विराटनगर पछि परेको हो । यो ठाउँबाट विराटनगरलाई अघि बढाउन म लाग्नेछु ।
थापा: उद्योगका लागि स्थानीय तहमा कच्चा पदार्थको अभाव छ । जुट उद्योगकै लागि बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ । उद्योग व्यवसायी पलायन हुनुका पछि राज्यको नीतिगत समस्या छ । केन्द्रसँग समन्वय गरेर त्यसलाई हटाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र वातावरण दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने मेरो योजना हो ।
प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०६:४१